सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेस: यी तपाईका लागि सर्वश्रेष्ठ हुन् क्रिएटिव अनलाइन
एनकर्नी आर्कोया | 16/06/2021 08:34 | ट्रिक्स
यदि तपाईं फोटोशपमा नियमित हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए पक्कै पनि एउटा कुरा जुन तपाईंलाई कार्यक्रमको बारेमा सब भन्दा आकर्षण गर्दछ फोटोशप ब्रशेस। उनीहरूले तपाईको ठाउँ मात्र बचाउँदैनन्, तर तपाई सृष्टिहरू यति सफल पाउनुहुनेछ कि तपाईको ग्राहकहरु भ्रममा छन्, ठीक?
तर, फोटोशप ब्रशेहरू के हुन्? सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेहरू के हुन्? ती कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? हामी तपाईंसँग ती सबैको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं र तल झन् अधिक केहि छन जुन तपाईंसँग उनीहरूको बारेमा राम्रो विचार हुन्छ र सबै भन्दा बढि तपाईंलाई त्यहाँ बाहिरका उत्तम ब्रशेको उदाहरणहरू दिन्छन्।
1 फोटोशप ब्रशेहरू के हुन्?
1.1 उत्तम फोटोशप ब्रशेस कसरी स्थापना गर्ने
2 चित्रका लागि उत्तम फोटोशप ब्रशेस
2.1 सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेस: वेभेनवाटर
2.2 Carles मार्सल
2.3 सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेस: आरोन ग्रिफिन
2.4 LilithDemoness द्वारा ब्रश
2.5 ब्रिट्नी मर्फी ईंक ब्रशेस
2.6 Eilert Janßen द्वारा यथार्थवादी ब्रशेस
2.7 मानव छाला ब्रशेस
2.8 सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेस: द्रुत पेन्ट्स
2.9 वातावरणीय ब्रशेस
2.10 भाँचिएको गिलास प्रभावको साथ ब्रश
2.11 प्लान्ट ब्रशेस
फोटोशप ब्रशेहरू के हुन्?
फोटोशप ब्रशेस ब्रशे पनि हुन्। यी आकारहरू हुन् जुन प्रिसेट गरिएको र फोटोशप ब्रश उपकरणमा थपियो। त्यहाँ धेरै फरक व्यक्तिहरू छन्, र वास्तवमा तपाईं आफैले सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र अन्यसँग साझेदारी गर्नुहोस्।
तिनीहरूले सेवा छविलाई थप यथार्थवादी वा शानदार देखिनको लागि मोनेटिज र रचनाहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
उत्तम फोटोशप ब्रशेस कसरी स्थापना गर्ने
यदि तपाई के चाहानुहुन्छ ब्रशेस स्थापना गर्नु हो जुन हामी अर्को कुरा गर्न लाग्छौं, तब तपाईले प्रोग्राममा कसरी थप्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ। तपाईंले जान्नुपर्ने पहिलो कुरा यो हो कि यी फाइलहरू .abr मा समाप्त हुन्छन्। ब्रशहरू डाउनलोड भए पछि तपाईंले के गर्नु पर्छ फोटोशप ब्रशेस फोल्डरमा राख्नु भनेको। यो सामान्यतया: पूर्वनिर्धारित रूपमा सी: / प्रोग्राम फाईलहरू / एडोब / एडोब फोटोशप सीसी (संस्करण) / प्रिसेट्स / ब्रशेमा हुन्छ।
हामी सिफारिस गर्दछौं कि, एकचोटि तपाईंसँग त्यहाँ भए पछि, तपाईंले ती शब्दहरूको नाम बदल्नुहोस् जुन तपाईं पहिचान गर्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईंसँग धेरै ब्रशेस छन् भने। अब तपाईले केवल फोटोशप प्रोग्राम खोल्नुपर्नेछ र तपाईंसँग ब्रश उपकरण, र ट्याब माथिको मेनूमा देखिनेछ। तपाईलाई आवाश्यकता प्राप्त गर्न तपाई सम्पूर्ण सूची हेर्न सक्नुहुन्छ।
चित्रका लागि उत्तम फोटोशप ब्रशेस
जस्तो कि हामीलाई थाहा छ कि तपाईं व्यावहारिक हुन रुचाउनुहुन्छ, र तपाईंलाई चाहिएको केहि चीजहरू थाहा पाउनु पर्छ जुन तपाईंको काम गर्नको लागि, हामी तपाईंसँग टिप्पणी गर्नेछौं। सबै भन्दा राम्रो फोटोशप ब्रशे के हो? तिनीहरू मध्ये धेरै नि: शुल्क छन्, त्यसैले तपाईंले यसलाई खोज्न मात्रै पर्छ, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्। अन्य भुक्तान गरियो, तर तिनीहरू यसको लागि लायक छन्।
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कुन को लागी हाम्रो लागि सब भन्दा राम्रो हो?
सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेस: वेभेनवाटर
यो ब्रश तपाईं यसलाई व्यक्तिगत प्रयोगको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछतर यदि तपाइँ यसको डिजाइनर, माइकल गुइमोंटलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने, उसले तपाइँलाई व्यावसायिक इजाजत पत्रको लागि अनुमति दिन सक्छ। यसमा तपाइँले एकल ब्रश फेला पार्नुहुने छैन, वास्तवमा त्यहाँ धेरै धेरै छन् जुन कुनै पनि परियोजनालाई एक अद्वितीय परिणाम दिन्छ।
यस तरीकाले तपाईले निरन्तर ब्रशेस सिर्जना गर्नुपर्दैन, तर तपाईले पहिल्यै नै ती सबै बनाइसकेका छौं (वा लगभग सबै)।
El कार्ल मार्सलको फोटोशप ब्रशे प्याक त्यहाँ बाहिर सबैभन्दा पूर्ण एक हो, र यसले तपाइँलाई क्लाउड ब्रशेस मात्र नभएर बनावटहरू पनि दिन्छ, कला र फोटोग्राफी बीच मिक्स गर्दछ ...
धेरै त्यस्तै एक जोनास डी रोको हो। वास्तवमा, यो भनिन्छ कि कार्लस मार्सल यस अन्य एक मा आधारित छ।
सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेस: आरोन ग्रिफिन
यसको डिजाइनर, आरोन ग्रिफिन, आफ्नो फोटोशप ब्रश वाणिज्यिक र व्यक्तिगत प्रयोग दुबै नि: शुल्क बनाएको छ। यो चित्रकार र वैचारिक कलाकार प्रभावशाली मानव फिगर सिर्जना द्वारा चित्रित छ, र, निस्सन्देह, नि: शुल्क आफ्नो "स्रोत" प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं तिनीहरूलाई समात्नुहुन्छ भने, हिचकिचाउनुहोस् र उनीहरूको फाइदा लिनुहोस्, किनकि तपाईंको प्रोजेक्टहरू धेरै उत्तम हुनेछ।
LilithDemoness द्वारा ब्रश
साथै दुबै व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोगको लागि निःशुल्क प्रस्ताव गरियो, LilithDemoness, नाम यो कलाकारको डिभियन्टआर्टमा छ, तपाइँलाई १ 14 ब्रशे प्रदान गर्दछ, ती सबै र paint्गको रौंमा आधारित छन् जुन यथार्थवादी देखिन्छ, ताकि तपाईं आफ्नो कामको आवश्यकता पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्रिट्नी मर्फी ईंक ब्रशेस
यदि तपाइँ तपाइँको सृष्टिलाई मसी यथार्थवादको भावना दिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईले यी प्रयास गर्नुपर्नेछ। यो सब भन्दा राम्रो फोटोशप ब्रशेमा आधारित एक डिजाईन हो कि यस्तो लाग्दछ कि विवरणहरू हातले चित्रित गरिएको छ, वा तिनीहरू सँधै आएका छन्।
यसको डिजाइनर हो ब्रिट्नी मर्फी र यी ब्रशेसलाई व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि निःशुल्क प्रदान गर्दछ। ती मध्ये तपाईले फेला परेको र dको दाग, बाक्लो र पातलो लाइनहरू, आदि हुन्।
Eilert Janßen द्वारा यथार्थवादी ब्रशेस
यी Eilert Janßen ब्रशेहरू पनि निःशुल्क छन्, तपाई तिनीहरूलाई व्यक्तिगत वा व्यावसायिक परियोजनाहरूमा प्रयोग गर्नुहोला। तिनीहरू १२ ब्रशले बनेका छन् जुन तपाईंको छविहरूलाई यस्तो मार्मा दिनेछ कि यस्तो मार्कले चित्रित गरेको थियो।
निस्सन्देह, तिनीहरू केवल तिनीहरू मात्र हुन् जुन यो डिजाइनरसँग छन्, त्यहाँ छन् 300०० भन्दा बढी किफायती मार्कर ब्रशेसहरू स्क्रिप्टहरू, औद्योगिक डिजाइनहरू वा फेशनका लागि उत्तम।
मानव छाला ब्रशेस
के तपाईंले मानव छालाको अनुभूति दिन एउटा उदाहरण दिन आवश्यक छ? ठीक छ, नहिचकिचाउनुहोस्, यहाँ तपाईंसँग यो विकल्प छ। यो प्रयोगकर्ता env1ro को एक रचना हो जुन केवल व्यक्तिगत प्रयोगको लागि प्रस्ताव गर्दछ (व्यावसायिकको लागि तपाईंले उसलाई लेख्नु पर्छ)।
यस पोलिश कलाकारले ब्रशहरू मानव छालामा र paint्गका लागि सिर्जना गरे, तर तिनीहरू टच-अप वा मेकअपको लागि पूर्ण रूपमा काम गर्दछन्।
सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेस: द्रुत पेन्ट्स
यदि तपाईं केहि द्रुत पेन्टहरू चाहानुहुन्छ, यी Darek Zabrocki द्वारा उत्तम छन्। यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, यो डिजाईनर विश्वमा सब भन्दा राम्रो चिनिन्छ, विशेष गरी जब उसले हेलो वार्स २, एसाइनस क्राईड वा म्याजिक: द गॅदरिंग जस्ता खेलहरू जारी गर्ने कम्पनीहरूका लागि काम गर्यो।
अब, यसले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ तपाईको ब्रशेसहरू स्वतन्त्र गर्नुहोस्, दुबै व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोगको लागि।
यदि तपाइँ के चाहानुहुन्छ छवि, फोटोग्राफ वा चित्रका लागि अर्को हेराई दिनुहोस्, यी ब्रशेसको साथ तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सिर्जनाकर्ता DeanOyebo हो र तिनीहरू व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि उपलब्ध छन्। वास्तवमा, कलाकारले प्रस्ताव गरेको तस्बिरले संकेत गर्दछ कि यो फ्रि प्याकमा ब्रशको साथ सिर्जना गरिएको हो।
भाँचिएको गिलास प्रभावको साथ ब्रश
फोटो खिच्दै गर्दा कुनै व्यक्तिले शीशा भाँच्दछन्। तर अब ब्रुशलाई यसको अनुकरण गर्न वास्तविक धन्यवाद हुनुपर्दैन। तपाई बिभिन्न प्रकारका पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले खोज्नु पर्छ तपाईले के चाहानुहुन्छ।
के तपाई बिरूवा कोर्नु हुन्न तर ब्रश प्रयोग गरेर कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? खैर, यो बी सिल्भिया द्वारा यस सृष्टि को बारे मा हो। तिनीहरू नि: शुल्क छन् (व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोग, यद्यपि यसको स्वामित्वको प्रमाण चाहिन्छ)।
इन्टरनेट को माध्यम बाट तपाईं धेरै अधिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेस। तपाईले खोज्नु भएको कुरा खोज्नको लागि तपाईले केहि समय समर्पण गर्नु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्रिक्स » सर्वश्रेष्ठ फोटोशप ब्रशेस